Họtelu ndi di na Accra, Greater Accra Region - Tinye akwụkwọ ugbu a, Kwuọ ụgwọ ma emesi a!
Accra, Obodo Isi Ochichi nke Ghana
Accra bụ obodo nke nwere onu ogugu mmadụ di ukwuu nke bu kwa isi obodo Ghana, bu nke na anọgide dika otu n'ime isi obodo ndị kasị nwere nchekwa na nkpụchite na mba Afrika. Ihe isi aku nke mba Ghana ndi dị ka ego, oru ubi na ulo oru mmeputa ihe nile bu nke onodu ya di na Accra.
Ọtụtụ n'ime ebe obibi na ọfịsi ndị ọchịchị nke govoomenti dị ka ụlọ ọrụ nke onye isi ala Ghana bu nke a mara dị ka ụlọ Flagstaff, ụlọ nzuko ndi ome iwu nke Ghana bu nke di cha na Accra . Enwere ihe ozi igwe komputa (Ghana web) bu nke a na akpọ "My joy online" bu ebe i nwere ike I nweta ozi ihe nile ndi mere ọhụrụ nke mba Ghana.
Ebe Njem Nleta di na Ghana
Accra na enweta ndi obia nke nzube ha na a bu maka njem nleta na obi ụtọ nke nkporimgbe dị ka enwere ọtụtụ ebe ihe ngosi ncheta nke mgbe ochie, ememe nke a na eme na abalị bu nke a na akpo (Night Club) na okwu beeke bu nke a na eme na obodo Accra na Ahia Makola ama ama ebe I puru i nweta ihe nile ọ bụla ichoro.
Ogige nke ihe ngosi nke mgbe ochie nke obodo Ghana (National Museum), Ogige ebe ihe nka na egwuruegwu nke Ghana ( National Theatre) bu nke ewuru na udi pụrụ iche di na udidi atumatu nke China.
E nwere ulo obibi nke akikọ ochie nke ndi mbiara-mbiara mba ozo bu nke ndi mba Danish wuru na narị afọ ndi garaga, ebe ndi dị ka Ussher Fort, James Fort na ulo ukwuu nke Osu. Ogige maka ihe omenala nke obodo Accra, Ogbo egwuruegwu ukwuu nke Accra, ogige nke akikọ ochie nke ndi (Black Star Square) na ebe ulo akwukwo nke ndi egwu na ihe nka bu cha ebe ogige nleta ndi di na Accra.
Oge ihe na enye obi uto na Accra bu nke na ezụghị ọke ma bụrụ na ị gaghi na odo oke osimiri nke Accra na ewu ewu, ndi dị ka Labadi Beach na Kokrobite Beach.
Hotelu Ndi Di Na Accra
E nwere ọtụtụ hotelu ndi di na Ghana di na njikere ime ka ọnụnọ gị buru nke kwesịrị ncheta site na I nye gi nlekọta nke onye ọbịa puru iche. Golden Tulip Accra bụ otu n'ime hotelu ndị kasị nwere ugwu na udi ọzi ha na enye na ezi ihe ngwà ọrụ puru iche. Accra bụ otu n'ime obodo ndị kasị mma na Africa.
Ọdụ ugboelu mba uwa nke Kokota bụ isi ọdụ ugboelu na Accra; ọ na-eje ozi na nzube nke ndi agha na nke ndi mmadu bi na obodo , mgbe Accra nwere usoro ụgbọ okporo ígwè nke na
a ga Kumasi na Takordia. Ugboala tagzi na Accra nwere otutu uzo opuru iji rute akụkụ obodo nta nile di na Accra ma onu ego ya bu nke a puru ikwe onu di ka otutu ugboala tagzi bu nke nọ na-enweghị ihe nguko nke ọsọ awarawara akporo (taximeters) na okwu beeke.
E nwekwara obere ugboala bụs bu nke a na akpo Trotros; ọ bụ ugboala nke juru ebe nile na nke onu ego ya di ala maka ime njem na Accra.
Ugboala bụs Metro na ebu ndi njem bu nke ewebatara na Accra n'oge mmalite nke narị afọ iri na-ọzọ iji meka onu ego nke ime njem di ala kari nke karịa trotro nye ụmụ amaala bu nke ga enyekwa ha obi ruru ala maka ime njem.
Họtelu Adenta Họtelu Dome Họtelu Kwabenya Họtelu Teshie Họtelu Airport Area Họtelu Achimota